Ngaba Ngokwenene Kukuzibandakanya? | Martech Zone
Ngaba Ngokwenene Kukuzibandakanya?
Lwesine, Okthobha 3, 2019 Lwesine, Okthobha 3, 2019 Douglas Karr
Ukuba ndithetha nentombazana endithandana nayo engama-83% ngaphezulu kule nyanga kunenyanga ephelileyo, ndinguye ukubandakanyeka ngakumbi? Ungathini xa ndinokubeka izimvo ezimbalwa ngaye? Ndithembisene ngomtshato?
Iinkcazo zothethathethwano zicacile:
(1) Isivumelwano esisesikweni sokutshata.
(2) Ilungiselelo lokwenza into okanye ukuya kwenye indawo ngexesha elimisiweyo.
UMerriam Webster Inkcazo yokuzibandakanya
Ngaphezulu kwe Ishumi leminyaka eyadlulayo, Ndiqale ndapapasha le rant ndinqwenela ukuba abathengisi bayeke ukuveza eli gama Nxaxheba njengemetriki yeshishini. Namhlanje isengumba kumzi mveliso wethu ngoko ke ndiyilandele ngevidiyo engezantsi.
Ixesha elilinganiswe kwiphepha, inani lamagqabaza, inani labalandeli, inani leevoti, okanye nenani lemizuzu yevidiyo ebukelweyo ayilincedi ishishini lakho ngaphandle kokuba ungangqamanisa Nxaxheba ukuya kwinyani Iziphumo zeshishini. Ukuba awukwazi, yinto nje imitha engento.
Ndisakhala ngokuxhatshazwa kwekota Nxaxheba namhlanje kuba ndingqina abathengi abaninzi kakhulu bachitha imali eninzi kumxholo ongaboneleli ngenzuzo yeshishini.
Ayiyo Nxaxheba, yi ukutshata. Kwaye oko akuthethi ukuba abathengisi akufuneki balandele uhlobo oluthile lokunxibelelana phakathi kwababukeli, abalandeli, abalandeli, abaphulaphuli, njl njl. Kodwa abathengisi kufuneka ekugqibeleni balungelelanise unxibelelwano kunye neziphumo zeshishini zokwenyani.
Ukuthandana yiyo nayiphi na imisebenzi yentlalontle eyenziwa, ngesiqhelo, ngabantu ababini ngenjongo yokuvavanya ukulungelwa komnye njengeqabane labo.
Ukuba iindwendwe zakho zichitha ixesha elininzi kwindawo yakho, siyavuyisana nawe! Uthandana ngakumbi kwaye luphawu olulungileyo… kodwa ayisiyo ngxoxo. Xa undwendwe lwakho luyithengile iringi kwaye luyibeka emnweni wakho, ndixelele ukuba uyabandakanyeka. Xa inani labo batyeleleyo lonyuka kwaye bathenga ngaphezulu kwiwebhusayithi yakho, ungandixelela ukuba ukubandakanyeka kwakho kuyanda.
Abathengisi abangakwaziyo imilinganiselo yokubuya kutyalo-mali kwimidiya yoluntu basebenzise amagama afana nokuzibandakanya ukwenza ukuba iinzame zabo zibe semthethweni kwaye wow abathengi babo… ngelixa bemosha imali yabo.
Xa uJeffrey Glueck wenza intetho yokuvula kwiNkomfa yoMbutho waseMarketing kwiminyaka elishumi eyadlulayo, waxelela ibali elikhulu le Travelocity ukuqala umkhankaso wemidiya yoluntu usebenzisa i gnome kwaye MySpace.
Ngokwimigangatho yokuzibandakanya, eli phulo laba yimpumelelo enkulu… wonke umntu waba ngumhlobo wenyani kwaye izimvo kunye neencoko zabhabha! Abantu bachitha ixesha elininzi kwiphepha kwaye bekukho itoni yokuvezwa. Ngelishwa, nangona kunjalo, eli phulo laxabisa i-300k yeedola kwaye lasilela ekuqhubeni ishishini ukuya kwi-Travelocity. Ngamanye amagama… akukho uthethathethwano.
PS: Kwinqaku elisecaleni… ndinentombazana endiyithandayo kodwa asizibandakanyanga.
I-PPS: Enkosi ku I-Ablog Cinema ukuvelisa le vidiyo inomtsalane! Le yeyesibini kweyethu Iintsomi, izinto ezingezizo, kunye neeRenti uthotho.
Icala elisecaleni: Iindlela eziqhutywa ziDatha zeAmazon eziDatha
Njani i-3D Visualization + CPQ Ukuqhuba ukuThengisa
Epreli 25, 2009 ngo-8: 52 AM
Nkosi elungileyo… Ndiphantse ndawa esitulweni sam eofisini emva kokufunda isihloko sale post. I-Traffic ayinamsebenzi ekuhambeni kwexesha.. iintengiso zibaluleke kangakanani.. Ingeniso. Ingeniso. Ingeniso.
Epreli 25, 2009 ngo-12: 51 PM
Sivuyisana nawe ngokungenisa uStephen enqanaweni. Ungumfo obalaseleyo kwaye ndiyavuya kuba eye wazihlanganisa nani… Ndicinga ukuba niya kumangaliswa yindlela agrumba ngayo aze achaze izinto.
Re: oku. Ndicinga ukuba ukwakha ubudlelwane nabathengi bakho kunye nabathengi kubaluleke kakhulu-kwaye ezinye izinto kunzima kakhulu ukuzilinganisa. Esinye sezizathu zokuba ndithande kakhulu ukubhloga kunye nemidiya yoluntu kukuba ndiyakwazi ukubeka elubala, ndinokunyaniseka, ndinokunika abathengi bam ingqalelo enkulu - kodwa ngaphezu kwakho konke - NDIYAYAZI ukuba zonke ezo zinto zazinzima. ukulinganisa ngaphambili kuyalinganiseka ngoku.
Ndifuna nje ukucela umngeni kubathengisi ukuba banike abathengi babo ifaneli ebonakalayo ebanika ubungqina bokuba u-a ukhokelela ku-b, b ukuya ku-c, kunye no-c ukuya ku-d. Xa abathengi befumanisa ukuba ukuvula, ukunyaniseka kunye nokufumaneka ... kuya kuba ngcono kuyo! Kufuneka nje sibonakalise kubo.
Kuhle ukukubona apha! Uza nini kwiNdebe yeBhotyi?
Epreli 25, 2009 ngo-11: 44 AM
Mhlawumbi sizakungena kwingxoxo ye-semantic apha, kodwa ndicinga ukuba kufanelekile ukuba nayo.
A. Kubonakala ngathi uthethathethwano sisiganeko esikwisinye kwisifaniso sakho (okanye isiganeko esiqaliswe kuphela ngokuthengwa). Ndingatsho ukuba enye inkcazo yothethathethwano “kukutsalela okanye ukubandakanya” umntu kwincoko okanye kubudlelwane. Uthethathethwano ayisosiganeko sesinye okanye sisehlo sovuthondaba. Bubudlelwane obuncinci obukhokelela kubudlelwane obutyebileyo phakathi kwenkampani kunye nomthengi. Iyacutha umgama phakathi kwabo.
B. Nganye kwezo ntetho "zothethathethwano" ozidwelise zinokulinganiswa kwaye nam, ndizichaza njengothethathethwano. Apho ndabelana ngokuthandabuza kwakho kuxa nganye yezi ntetho ibalwa ngenxa yabo. Kungenxa yokuba umntu ushiya uluvo akuthethi ukuba basondele ekuthatheni inyathelo elichazwe kwishishini elinjengokuthenga. Izenzo zothethathethwano kufuneka zakhele kwisiphumo esithile esifunwa lishishini. Ukuthengisa kufuneka kugqibezele le ndlela (ehlala ingekho mgca). Ngokomzekelo, apho i-Travelocity ihlulekile kukudala nje umkhankaso wokwazisa opholileyo ngaphandle kokucinga ukuba ukubandakanyeka komthengi ngamnye kuya kwenza umntu ukuba agqibezele injongo yokuphela.
C. Ukuba sifuna ukusebenza nesifaniso sakho…Andiqondi ukuba iinkampani zonke zifumana umsesane kubathengi bazo. Iinkampani kufuneka zihlale zitsala umthengi, zibabandakanye, zakhe ubudlelwane obutsha kunye nabo. Ukuba inkampani icinga ukuba ekugqibeleni ihambe abathengi bayo phantsi kwendlela yomtshato, baya kumangaliswa ngokwenene ukuba uqhawulo-mtshato lukhawuleza kangakanani kumfanekiso wabo.
Uxolo ngamagqabantshintshi athatha ixesha elide, kodwa ndiyakholelwa ukuba uthethathethwano yimetric ebalulekileyo yokuthengisa kwaye inokwakhiwa ngokusebenzayo. Imbono nje eyahlukileyo.
Epreli 25, 2009 ngo-12: 37 PM
Ingxelo entle kunye nencoko entle. Ngokwengxelo yakho, ndingacela umngeni kuluvo lokuba nasiphi na kwezi ziganeko ngokwenene 'zikhokelela' kubudlelwane bezemali. Ndibonise ifanisi yentengiso yenkampani enye ebonelela ngobungqina bokuba iindlela eziphambili zokufumana abantu ukuba bathenge kwishishini lakho ziqala ngokubanika izimvo kwibhlog yakho… okanye kukho ubudlelwane phakathi kwenani labalandeli onalo kunye nohlahlo lwabiwo mali lwakho lwentengiso.
Ndicinga ukuba ukuphoxeka kwam kulele kwinto yokuba abantu bakholelwa ukuba oku kuya kuba luhlobo oluthile lwesalathisi sokusebenza kwamashishini. Njengomthengisi, kufuneka ndinikeze UBUNGQINA kunye nedatha yohlalutyo ebonisa isizathu kunye nobudlelwane besiphumo phakathi kwezi zinto kunye nokuthengwa kwangempela. Ukuza kuthi ga ngoku, ndicinga ukuba yi-bs
Epreli 25, 2009 ngo-7: 45 PM
Doug, lo ngumzekeliso omkhulu, kwaye ndiyavuma 'uthethathethwano' lusetyenziswa kakhulu kwaye luphelelwe. Ekugqibeleni abathengisi kufuneka bagxile kwinto eqhuba ishishini kwaye izise abantu ngokunzulu malunga nokunikela ngemali yabo kwiimveliso kunye neenkonzo zakho. -UMichael